Manni Murtii Wayyaanee Pireezdaantii naannoo Gaambeellaa Hidhaan adabe.
Date: April 28, 2016Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Finfinnee, 28 Ebla 2016) Manni Murtii Federaala Wayyaanee Pirezdaantii naannoo Gaambeellaa duraanii Okeelloo Ookwaay dabalatee namoota 7 hidhaa cimaa waaggaa 9n adabe.
Himaticha ilaalee murtii kana kan dabarse Manni Murtii Olaanaa Feederaalaa Dhaddachi yakkaa 19ffaa ti.
Himatamtoonni galmee kana jalatti himataman Aakeelloo Ookaay, Deeviid Ujuluu, Uuchaan Oppeeyin, Uumaan Nyikiyaw, Ujuluu Chaam, Ataakaa Uwaar fi Ubaang Umadi dha.
Himatamaa 1ffaan bara isaan pireezdaantii naannichaa ta’anii tajaajilaa turana bara 1996 sablammii Anyiwaaki fi Nuweer jidduutti walitti bu’iinsi uumamee lubbuu namoota 400 badeera.
Pireezdaantichi walitti bu’iinsi uummame akka dhaabbatu gochuurra jabaatee akka itti fufuu fi ibsoota sobaa fi dogongoraa miidiyaa biyyoota alaatif laachaa turaniin waan gaarii hin hojjennes jedhame.
Akka isaan gaafachiisu ega baraniin booda Amajjii 1996 jaldhaaba fi konkolaachisaa isaanii fudhatanii gara biyya alaatti baqachuun, caalman walitti bu’iinsi akka hammaatu dhaabbilee miidiyaatif ibsa laachaa akka turanis galmeen himata isaanii ni muul’isa.
Noorweey deemun eeyyama jireenyaa ega argataniin booda, Warraaqsa Bilisummaa Gaambeellaarratti hoogganaa quunnamtii dhimma alaa ta’anii muudamuun Piitar Kaagaa waliin ajandaa shororkummaa gaggeessaa turan jedhameera.
Biyyootii Awrooppaa fi Ameerikaarra nanaanna’uun namoota gurmeessunii fi ji’atti nama tokkorraa buusii Doolaara 50 walitti qabaa kan turan yammuu ta’u, teelee koonfaransiin miseensota dhaabichaa waliin Mudde bara 2000 gaggeessanis akka ragaatti mana murtiitti irratti dhiyaatera.
Baruma sana ji’a Amajjii keessa Warraaqsi Bilisummaa Gaambeellaa bakka lamatti yammuu adda ba’u, obbo Ookeelloo Ookaay garee 1 yoo qabatan hundeessan dhaabichaa Piitar Kaagaan ammo isa 2ffaa qabachuun hojjechaa turan.
Sadarkaa hooggansa adda durummaa paartii gaggeessaniirra yammuu ga’an, Eertiraa, Jarman, Saa’udii Arabiyaa, Swiidini fi biyyoota biroorras sochoo’un hojii Ityoophiyaa shororkeessuu hojjechaa turan jedhame.
Ameerikaa deemunis Joonsan Ujuluun hoogantummaan paartilee Warraaqsa Bilisummaa Gaambeellaa fi Warraaqsa Demokraatummaa Gaambellaa akka gaggeessaa turanis himanni isaanii ni addeessa.
Biyya turanii gara Yuugaandaa deemunis namoonni 860 leenjii siyaasaa fi loltummaa akka argatan ega taasisaniin booda Finciltoota Sudaanitti akka makaman taasisuun isaanis himameera.
Himatamaa 2ffaa; Deeviid Ujuluun ammo lammummaa Sudaan Kibbaa kan argate nama umrii 36 yammuu ta’u, garicha achii qindeessaa akka tures himameera.
Fulbaana bara 2005 kaasee maallaqa baankota magaalaa Minesootaa keessatti hojiichaaf kuufamaa ture walitti qabee namoonni leenji’an finciltoota Sudaan Kibbaatti makamanii akka lolan taasisaa tureera jedhame.
Deeviid Ujuluu fi Aakeelloo Ookaay dabalatee namoonni 7 badii shororkeessummaa qaqqabsiisuf osoo deeman humna nageenyaa waliinii Sudaan Kibbaa fi Ityoophiyaan to’annoo jala oolan.
Naannoo Gaambeellaa aanaalee Diimaa fi Joor deemanii namoota hojii warqee baasurratti bobba’an ukkaamsun gara hoogganaa finciltoota Sudaan Kibbaa Deeviid Yaawyaaw geessun leenjii kennisiisun badii qaqqabsiisuf yaadaa akka turan himanni isaanii ni eera.
Abbaan Alangaas Federaalaas Waxabajjii 5, 2006 himata shororkeessummaa irratti baneera.
Himaticha ilaalee bitaa mirgaan mormisiisaa kan ture Manni Murtii Olaanaa Feederaalaa Dhaddachi yakkaa 19ffaan himatamtoonni ragaa ittisaa isaan dhiyeeffatan kuffisuun yaada irraa fideera.
Hundi isaanituu yakka ittiin himataman hin raawwanne jedhanii mormuu isaanitiin ragaaleen abbaan alangaa dhiyeesse ilaalamaniiru.
Himatamtoonnis himannaa isaanirratti dhiyaatte ofirraa ittisuu dadhabuu isaanitiin balleessummaan murtoon irratti laatameera.
Himatamtoonni balleessadha yakka ittiin jedhamaniin yaadonni adabbii salphisasan 2 qabameefii, obbo Okeelloo Ookwaay fi himatamaa 2ffaan Deeviid Ujuluun hidhaa cimaa waggaa 9 akka adabaman Manni Murtii Olaanaa Federaalaa Dhaddacha 19ffaa murtoo laatera.
Himatamaa 3ffaadhaa hamma 7ffaatti kan jiran ammo hidhaa cimaa waggaa 7 torbaan akka adabanman murtaa’era.
Previous Previous post: Korri Tokkummaa Caffee Gadaa Oromoo murtiilee dabarsuun xumurame
Next Next post: Siidaan Yaadannoo Artisti Admaasuu Biraanuu Eebbifame.